Xildhibaan Afaraale oo eedeeyay Ciidanka Millitariga Soomaaliya – XAMAR POST
Qaar ka tirsan xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka Soomaliya ayaa rag ku lebisan dareeska ciidanka Millitariga ku eedeeyay in 19 gabdhood bishan gudaheeda ay kufsi ugu geysteen wadada xiriirisa Muqdisho iyo Baydhabo.
Xildhibaanadan ayaa waxa ay Guddiga joogtada ee Golaha Shacabka la wadaageen dhibaatada ka taagan wadada xiriirisa magaalada Muqdisho iyo Baydhabo.
Xildhibaan Maxamed Xuseen Afaraale oo la hadlay Idaacadda Risaala ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in bishan June gudaheeda la kufsaday 19 gabdhood, oo 11 ka mid ah gabdhahaasi hal maalin la kufsaday.
“Arrin aad u daran ayaa ka jirta wadada xiriirisa Muqdisho iyo Baydhabo, dhulkii dowladda ay maamuleysay ayaaba ay cabsi ka jirtaa, shacabka ma heystaan amni, dhulka Shabaabka ayaaba nabad jirtaa, dadkaasi waxay doonayaan in ay iska horkeenaan dowladda iyo shacabka, waxaana dowladda ka codsaneynaa in arrintaasi ay wax ka qabato.” Ayuu yiri Xildhibaan Afaraale.
Kulanka Guddiga joogtada ah ee golaha shacabka Baarlamaanka JFS oo uu shir guddoominayay ku-simaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ahna guddoomiyaha golaha shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa shalay waxaa si kulul loogaga hadlay dhibaatada ka taagan wadada Muqdisho iyo Baydhabo, waxaana xildhibaanada ay sheegeen in arrintaasi wax laga qabanayo.